IiNcwadi zoLondolozo lweeNqweliso zeeNqweliso zeeMoto
I-Ph Ph Imveliso yokuhlamba imoto kwi-OPS
January 23, 2019 by admin@opskar.com
Imveliso elungileyo yokuhlamba imoto yangaphandle
Sonke sinqwenela ukuba nenqwelo ecocekileyo neyeqaqambileyo, kodwa ngamanye amaxesha asinayo ixesha lokuyithatha kwisikhululo sokuhlamba,
okanye asinayo endleleni, okanye siyalibala. Yintoni eqinisekile kukuba ngamanye amaxesha sinokungabaza zombini indlela
ukuba kusetyenziswe ukuhlamba imoto, kwaye iinkalo kufuneka ziqwalasele xa ukhetha imveliso yokucoca.
Ngokuphathelele indlela yokuhlamba iimoto, zonke zizinzuzo kunye nokungalunganga:
Ukuhlamba iitoni: Yona ihamba ngokukhawuleza kwaye ithandwa kakhulu ukuhlamba imoto, kodwa inengxaki
ukuba abaxhasi bawonakalisa umzimba.
Ipayipi exinzelelweyo: Ziyakuphepha umonakalo emzimbeni, kodwa kuthetha ukuba kufuneka senze umsebenzi wokucoca imoto ngokwethu kwaye sishiye eninzi ukufunayo.
Ukucocwa ngesandla: Nguye onika iziphumo ezilungileyo zokuhlamba imoto,
nangona ixabiso elininzi malunga nexesha kunye nomzamo.
Icocwa ngokomisa: Akuncinci kwazo zonke iindlela zokucoca imoto.
Kudinga iimveliso ezithile zokucoca, ezibiza kakhulu, kodwa ngakolunye uhlangothi,
Ukusetyenziswa kwamanzi kuphantsi kwaye kuyaphumelela, kwaye umgangatho walo mphumo uyamangalisa.
Ngezantsi, sibhala iinkalo ukuba ziqwalaselwe xa sikhetha imveliso emihle ukuhlamba imoto yethu
kwaye uyishiye ingenangqiqo:
Ukusetyenziswa kokusetyenziswa: Ukususela kumbono wethu, umkhiqizo ofuna umgudu omncinci
inxalenye yethu kunye nesiphumo salo yokucoca uqeqesho, yenye yezona zinto zibalulekileyo
ukucingela. Ngokomzekelo, kwimarike, kukho imveliso yokuhlamba iimoto akudingeki ukuhlamba kuqala
kwaye kwimizuzu ephezulu ye-5, inkqubo yokucoca ingagqiba.
Economic: Lo mbandela uya kuba nokubaluleka okungakumbi kuncinci, kuxhomekeke kwibhajethi yethu.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba akufanele nje ucinge ngamanani emveliso,
kodwa kwakhona indleko yamanzi efunekayo ukuhlamba imoto kunye nexesha lomntu owenza inkqubo.
Ngenxa yesi sizathu, umbandela wokuqala esiye sichaza ukuhlala okubaluleke kakhulu.
ukusebenza: Akukuphela nje ukulungiswa kokusetyenziswa kunye nohlahlo-lwabiwo-mali kubalulekile, kodwa umphumo wokucoca imoto ibuhle kakhulu, kwaye sisishiya imoto ekhanyayo, ehlambulukileyo, ngaphandle kwamaconsi e-lime,
kwaye uyikhusele kwimisebe yelanga xa uhlala kwindawo apho kunokungabikho kancinci elangeni.
Ifomathi yokwethulwa: Kufuneka siqwalasele nokuba imveliso ivela kwifom ye-liquid
isepha okanye ipowder. Ukhetho luya kuxhomekeka kwizikhetho zethu. Kwimeko yethu, sichaza i powder
umboniso, kuba nangona ufuna unyathelo langaphambili lokuchithwa i powder kumanzi amancinci,
ekugqibeleni, inkqubo yokuhlanza ilula kwaye ilula.
Uhlobo kummandla: Ukunceda ukukhusela indawo yethu, kufuneka siqwalasele
kwinqanaba le-PH lemveliso, rhoqo ekhetha i-PH ephantsi. Yingakho kufuneka sikhethe
Imveliso engcono kakhulu yokuhlamba imoto yangaphandle! Akugcini nje ukugcina iindleko kunye namaxesha, kodwa kwakhona kuya kuba namandla okugcina amanzi!
Ukukhethwa kwethu kweemveliso eziphambili zokuhlamba imoto, ngokusekelwe kwiingqinisiso ezimbini eziphambili kwiiplani ze-intanethi, zilandelayo:
-Mr. I-Strong-Premium Washing Powder
-OPS Ukuhlamba Imoto
-Veve Ukuhlamba Powder
I-Sam ye-STTP eyongezelelweyo Ukuxhoxisa ezininzi izenzo
I-Oxy Stain Remover Powder
Kukho nawuphi na, kungakhathaliseki ukuba yintoni indlela okanye umkhiqizo ukhethwa, kuhlale kucebise ukucoca imoto kaninzi,
kuba kulula ukuphumeza iziphumo ezingcono xa ukungcola kungagcini.
iindidi Iimveliso zeeNqweliso zeeMotoUshiye uluvo